सिस्नोको पाउडर बनाएर आत्मनिर्भर बन्दै भीमफेदीका स्थानीय, प्रतिकेजी रू. ७०० सम्ममा विक्री
भदौ २७, हेटौँडा । भीमफेदी गाउँपालिकाका स्थानीयहरुले बारीको कान्ला तथा वनजङ्गलमा खेर गइरहेको सिस्नोको सदुपयोग गर्दै पाउडर बनाएर विक्री वितरण गरेर आम्दानी गर्न थालेका छन् ।
केही स्थानीयले सिस्नोको पाउडर उत्पादन गरेर विभिन्न देशहरुमा प्रतिकेजी रू. ७०० सम्ममा निर्यात गरिरहेको र स्वदेशका विभिन्न शहरहरु र तारे हाटलमा समेत प्रतिकेजी रू. ५०० सम्ममा विक्री गरिरहेको अध्यक्ष लामाले बताए । वडाले अन्नबालीको विकल्पको रूपमा सिस्नो र टिम्मुर खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रयास गरिरहेको वडाध्यक्ष लामाको भनाइ छ । एक घण्टामा दुई डोको सिस्नोको मुन्टा टिप्न सकिने र दुई डोको सिस्नुको एक किलो धुलो बनिने अनि एक किलो सिस्नोको धुलो पाउडर प्रतिकेजी रू. ५०० देखि ७०० सम्ममा विक्री हुने भएपछि स्थानीय यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
सिस्नोको मुन्टा टिपेर प्रत्यक्षरूपमा घाम नपर्ने गरी केही दिन सुकाएर अख्र्याएपछि मेशीनमा वा ओखलमा पिनेर पाउडर बनाउन मिल्ने बताउछन् सिस्नोको पाउडर बनाउने तालीम दिँदै आएकी विमला विश्वकर्मा ।
सिस्नो औषधीय गुणले भरिपूर्ण भएको कारण धेरै व्यक्तिहरुले यसको सेवन गर्ने गरेको बताछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान क्याम्पसका प्राध्यापक कृष्णप्रसाद दाहाल । वनजङ्गल वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्राध्यापक दाहालका अनुसार मुन्टा टिप्दा वा फेर्दै लगाएर काट्दासमेत सिस्नो मासिदैन झन मौलाएर आउँछ ।
समुन्द्री सतहबाट २०० मिटरदेखिको चिस्यानयुक्त माटोमा सिस्नो पाइए पनि ७०० देखि एक हजार ३०० मिटरको उचाइमा सिस्नो प्रशस्त पाइन्छ । खेतीकै रूपमा लगाउने हो भने फलफूलको बगैँचाभित्र लगाएर दोहोरो आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रत्यक्ष घाम नलाग्ने ठाउँमा राम्रोसँग सप्रिने हुँदा सेपिलो वा अन्य बाली नसप्रने ठाउँमा पनि सिस्नो लगाउन सकिने उनले बताए । रासस